I-China SD6K LGP Bulldozer yoMvelisi kunye noMthengisi | Shehwa
I-bulldozer ye-SD6KLGP ixhotywe nge-injini yesithathu yolawulo lwe-elektroniki, impompo ye-hydraulic kunye nemoto, izigaba ezithathu zokunciphisa isantya kwiplanethi, inkqubo yokupholisa i-centralize4d, ukuhanjiswa kolawulo lokulingana kombane kunye nolawulo lomqhubi we-hydraulic. I-bulldozer ye-SD6KLGP inamandla amakhulu ...
I-bulldozer ye-SD6KLGP ixhotywe nge-injini yesithathu yolawulo lwe-elektroniki, impompo ye-hydraulic kunye nemoto, izigaba ezithathu zokunciphisa isantya kwiplanethi, inkqubo yokupholisa i-centralize4d, ukuhanjiswa kolawulo lokulingana kombane kunye nolawulo lomqhubi we-hydraulic. I-bulldozer ye-SD6KLGP inamandla anamandla, ukuthelekiswa okunengqiqo notshintsho lomthwalo, umsebenzi wepivot, umsebenzi oguqukayo kunye nokusebenza ngokukuko. Ikhabhathi yokutshixa eyothusayo enesithuba esikhulu sangaphakathi kunye nentsimi ebonakalayo ebonakalayo, ikhuselekile kwaye intle. I-SD6KLGP ugandaganda ngumatshini ofanelekileyo kulwakhiwo lwamanxweme aselunxwemeni, ioyile yasentlango, ucoceko lokusingqongileyo kunye nomgxobhozo.